Ụgbọ ala ụgbọ ala
Trolley akpa akpa
Nnukwu gwongworo aka
Ebe a na -ere nri Trolley
Anyị na -agbalị mgbe niile….
site na nchịkwa na 21-10-25
Site na mmepe nke ọha mmadụ, echiche oriri ndị mmadụ na-agbanwe nwayọ, were ụgbọ ala ụgbọ ala anyị dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ na-echebu ma ọ nwere ike iburu ngwongwo, ha agaghị a attentiona ntị ma ọ dị mma nke ọma, ọ naghị echekwa ma wiil ụgbọ ala na -eme mkpọtụ nke ukwuu….
Mee ike anyị niile na 2021
site na nchịkwa na 21-09-07
2021 bụ afọ siri ike n'ezie. Mmetụta nke COVID-19 na mba dị iche iche na-aga n'ihu, ire ahịa na ụlọ ọrụ dị iche iche na-ebelata. Na -emetụta oke onu oriri zuru ụwa ọnụ, igwe akụrụngwa ji ihe karịrị 40% bilie na aluminom n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50%. Ọnụ ego ihe inyeaka ndị ọzọ, dị ka katọn, teepu ...
Oge nke ụgbọ ibu ụgbọ ahịa mara mma
site na nchịkwa na 20-07-20
Site na mmepe nke teknụzụ ọgụgụ isi na mgbanwe ọhụrụ na ụlọ ọrụ na -ere ahịa, ọtụtụ ụlọ ọrụ amalitela ịzụlite ma ọ bụ jiri ụgbọ ala ịzụ ahịa mara mma. Agbanyeghị na ụgbọ ibu smart nwere ọtụtụ uru ngwa, ọ dịkwa mkpa ị attentiona ntị na nzuzo yana nsogbu ndị ọzọ. ...
Ịzụ ahịa ọtụtụ ebumnuche, ị kwesịrị ya
Ụgbọ ahịa ịzụ ahịa nwere ọtụtụ ebumnuche, ikike buru ibu, nwere ike ịnọdụ ala na n'ogige atụrụ, ndị na-azụ ahịa hụrụ ya n'anya nke ukwuu! Site na mmụba nke ụkpụrụ ibi ndụ, ihe ndị mmadụ chọrọ maka ịdị mma nke ndụ na -arịwanye elu ma dị elu, nke nwekwara nnukwu ...
Otu esi eji nkata ịzụ ahịa na ịzụ ahịa ụgbọ ala n'ụzọ ziri ezi
Site n'ọganihu ọha mmadụ, ndụ anyị na -adịwanye mma. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, ihe ịsa ahụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa kwa ụbọchị, ị nwere ike idozi nsogbu niile site na ịga na nnukwu ụlọ ahịa maka okirikiri. Ma ị maara? Nnukwu ụlọ ahịa bụ n'ezie nnukwu ebe nje na-ebute ...
Copyright - 2019-2020: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta - Mkpado na -ekpo ọkụ - Sitemap.xml - AMP Mobile